Yay Chan Pyin – Sawbwa Coffee
၂၀,၀၀၀ကျပ်နှင့်အထက် အော်ဒါများကို အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီ။ (ရန်ကုန်မှ မြို့နယ်များအတွက်သာ)
Light Roast Coffee: နိုင်ငံတကာမှ လူပြောများတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ရေချမ်းပြင် ရွာ က ကော်ဖီစေ့ တမျိူးထဲကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ကော်ဖီ ရဲ့ သိမ်‌မွေ့တဲ့ ချိုချဉ်သီး နဲ့ ပန်းလက်ဖက်‌ခြောက် ခံစားမှုရရှိ ရနိုင်ရန် အတွက် စနစ်တကျ လှော်ထားသော ကော်ဖီ‌ဖြစ်ပါတယ်။ ရေချမ်းပြင်ရဲ့ တစ်ရာသုံးဆယ့်တစ်ယောက် သော လယ်သမားများက ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ ကော်ဖီစေ့ကိုသာ အသုံးပြုထားပါတယ်။
Brewing Method: Filter, cafetiere, chemex.
Medium Roast: ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဟိုပေါင်း မှ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ 2019 မှာ No.1 ranking (SCAA rating 89.25) ရရှိခဲ့တဲ့ ကော်ဖီ‌စေ့ကို အသုံးပြုထားတဲ့ ကော်ဖီ ဖြစ်ပြီး ကော်ဖီ ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေ အတွက် သီးသန့် ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Tasting notes အနေနဲ့ ဆိုရင် မွှေးချို ပြီး စတော်ဘယ်ရီသီး၊ ယို၊ သစ်တော်သီး နဲ့ caramel ကဲ့သို့သော အရသာ ခံစားမှုမျိုးကို ရနိုင် မှာပါ။ Sawbwa...
Classic Blend: မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ specialty ကော်ဖီ ကို ရာနှုန်းပြည့် အသုံးပြုထားပြီး ချောကလက် ၏ ခါးသက်မှု နဲ့ ချိုတဲ့ အရသာကို ခံစားနိုင်မှာပါ။Brewing Method: espresso machine, filter, and cafetiere. To be enjoyed with or without milk.
Artisan Blend: မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ‌အကောင်းမွန်ဆုံးသော single origin ကော်ဖီစေ့တွေကို အသုံးပြုထားတဲ့ ရာနှုန်းပြည့် မြန်မာကော်ဖီ ဖြစ်ပါတယ်။Brewing Method: espresso machine, filter, cafetiere, and stove-top. To be enjoyed with or without milk.
Copyright © 2021, Sawbwa Coffee. Powered by Shopify